Ukufaneleka ngempela uye waba umkhuba imfashini kulezi zinsuku. Asazi ukuthi ukuze ngihlale ngiwumqemane futhi kumelwe kulungiselelwe ngokomzimba - kukubi. Yiqiniso, ukuqeqeshwa yazuza in ukuthandwa njengoba ekuqaleni ukubukeka kwabo base beba cishe ngendlela yokuphila kwabaningi.
Popularization imisebenzi yezemidlalo zibangele okuningi imibono ehlukene. Kodwa ophezulu ukusebenza uma ehambisana abantu isicelo zabo asungula ukudla kwabo nokubambelela iqoqo imithetho ehambisana ngqo nensiza.
1. Ukuthenga izibuko ezishibhile
Lapho uthenga izibuko ezishibhile umuntu enza iphutha elikhulu. Ekugcineni, abaningi bakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi iphuke noma ulahlekelwe iholidi yabo, ngakho noma ungayiboni umuzwa ukutshala emikhiqizweni ezibizayo.
Noma kunjalo, izibuko ezishibhile zenziwa eliphansi plastic, okungadingi empeleni sixhoshiwe kusukela UV eyingozi. Zenza abafundi bethu ukwandisa, kunokuba zinciphise ilanga. Ngakho, emehlweni namanje umthamo enkulu eyingozi ultraviolet emisebeni. Lokhu kungadala ale nkinga, futhi esimweni okubi ngisho avuse umdlavuza.
Ngakho ukwenza ngokwakho isipho futhi bachithe imali kwi-pair ezinhle izibuko. Uma cha ngakhokhela it ngalesosikhathi you are cishe engcono nje hhayi ukuthenga ezishibhile.
2. Crossing imilenze
Kukangaki ukugoqa imilenze yakho njalo uma usuhlala phansi? Kungenzeka awazi asiqapheli, ngoba isenzo esinjalo kuye kwaba umkhuba. Kodwa uhlezi lemilenze wawela icuphe nomfutho wegazi ophezulu futhi kungaholela ukuthuthukiswa varicose emithanjeni, futhi umonakalo ngisho sína eziyimpumelelo emsipheni. Ngakho ngokuzayo lapho uzithola ezinyaweni owela benza umzamo ukubeka zombili izinyawo phansi.
3. Ukudla etafuleni lakho
Abantu abaningi badle etafuleni lakho ukuze wonge isikhathi wenze izinto ezengeziwe, kodwa lokho akusho ukuthi kuhle. Okokuqala, ehhovisi ayenzelwanga ukusetshenziswa ukudla. Abantu iguliswa ukudla, kanye iphunga. Kunalokho ikhono lokungacasuli ukudla etafuleni lakho futhi wenze abanye bazizwe iphunga ukudla.
Kodwa ngisho noma ungenawo obakhathalelayo imithetho yokuziphatha futhi ingqondo, kufanele sinake yokuthi imishini ehhovisi ezitolo amathani amagciwane, okuyinto ayifanele wokugaya ukudla yakho ipheshana.
4. Ukulala ngohlangothi lwakho noma isisu
Abantu abaningi unomkhuba ngilale abasohlangothini lwakhe ozithandayo noma ngisho kwasesiswini, kodwa, kungakhathaliseki ukuthi lezi zikhundla elula, bakwazi ukuletha eziningi izinkinga.
Uma ukulala ngasohlangothini lwakho, ungayeki diaphragm wanda, okungase kubangele izinkinga zokuphefumula ubuhlungu emuva.
Sleeping esiswini igcwele nemiphumela nakakhulu impilo, ngoba ngeke nje ukhawule ukunyakaza of diaphragm yakho, kodwa futhi unalo ngicindezeleka kakhulu zonke izitho zangaphakathi. Ngokuvamile kutuswa ukulala ezinkalweni zabo.
5. Ukondla izinyoni
Abantu abaningi ukondla amajuba, ngakho ngahlala phezu kwesandla sazo. Uma uyikha phezulu le kubukeka engalimazi kakhulu, kodwa eqinisweni kuyingozi, ngobe ematfuba kufuduka izinyoni kwezifo ezithathelwanayo 50%. Umuntu angadluliselwa izifo ezifana psittacosis, colibacillosis, isifo sofuba kanye nabanye. Ngo amaphuphu jikelele ezisemadolobheni engcono kakhulu amagundane. Ngakho ukuhlala kude nabo.
6. Ulungiselela microwave popcorn
Akukhona ukuthi ama-popcorn kuyingozi emzimbeni wakho noma ama-microwave bayingozi. Ngokwengxenye enkulu kufanele sinake izithako umkhiqizo. Ezimweni eziningi, ama-popcorn zihlanganisa diacetyl, okuyinto uwoyela zokwenziwa. Lapho ukufuthelana, ke iyasha, uhogela, futhi umonakalo impahla amaphaphu akho.
Ngakho ngokuzayo lapho uthenga ama-popcorn ku ebhayisikobho, linda isikhashana, wasiqashisa kudambe. Kuthatha imizuzu embalwa futhi ngeke ugcine impilo.
7. Ubuhlungu usebenzisa amabhodlela amanzi ashisayo
Sebenzisa amabhodlela kanye namanzi ashisayo noma ice pack kuyizindlela luvame kakhulu yokuvikela ubuhlungu, futhi yebo, basebenza ezimweni ezithile. Kodwa kukhona izimo eziningi ezingaba ngemandla ngaphansi ngayo lezi zinqubo.
Ngokwesibonelo, iqiniso lokuthi angase aphanjaniswe a inkwantshu, ungase ube ne-ukuhlaselwa okukhulu appendicitis, okuyinto ngeke welapheke ngumuntu hot ibhodlela lamanzi noma ice iphakethe. Ungathola sibi ngempela. Ukulimala futhi akufanele ziphathwe ashisayo lamanzi ngesikhathi yokuqala amahora amabili ngemuva sokulungiselela yabo (kwezinye izimo - ngisho izinsuku ezimbalwa).
8. Ukugqoka izicathulo evulekile
Mhlawumbe, lapho kuqala ehlobo, usuvele ucabanga kufanele abeke ngezinyawo zabo. Ekugcineni, lokhu isizini lezimbadada, flip-flops nezicathulo nge izinzwane evulekile.
Yiqiniso, kuyindaba yomuntu siqu, kodwa cabanga wonke amagciwane e ezitaladini, futhi kanjani kalula bathole uwayisa kunokusikeka amancane emlenzeni yakho.
9. Ukuphuza uketshezi oluningi
Water - ukuphila, futhi umzimba wethu idinga ukutholakala kwamahala kwenani elithile ukuze isekele ukuphila. Siyaqiniseka ukuthi uma bezwa ukuthi abantu akhiwe 80% amanzi. Kodwa lokhu akusho ukuthi kufanele uphuze ke kakhulu.
Ngokuvamile esiwaphuzayo lapho thina womile, futhi lokhu ngempela ngokwanele umzimba wethu. uketshezi okweqile emzimbeni kungabangela ukulimala izinso zakho esimiso senhliziyo nemithambo yegazi.
Hepatitis C: ubude bempilo. ukuxilongwa ngendlela efanele nokwelashwa kweziguli hepatitis C
Boilers "Danko" - bayasethemba yezokuphepha